(Hadhwanaagnews) Thursday, June 14, 2018 12:38:24
Yaa laga bixinayaa Waxa llaga bixinayaa dhamaan cidii aaad adigu quudiso sida waxan siiso ama aad masuurfto sida caruurta xaaskaga
Ciidul fidrigu waa maalin kmid ah maalamaha faraxada leh ee illahay ku manaystay adoomihiisa Muslinkaa meel kasta oo ay kala joogan in ay maalintaa ka dhigtaan malin faraxad leh gacgacayl islaamnimoleh, sidoo kle waxa maalintaa cidul fidriga jirta in labixiyo sida magaca iyo diintaba ku cad (fidri ) hadaba qormadan waxaan idiinkugu soo bandhigayaa axkaamata cidul fidriga iyo waajibaadkeeda saxadaa ah intii alle SW iga garansiyyey, Diin ahaan iyo xukun ahaanba waxa jirta oo waa waajiba, diintana ku cad sidoo kale xadiisna lagu soo wariyey, waxa uu Ibnu-Cumar RDC kasoo wariyey Rasuulkeenii suubanaa CSW waxa uu yidhi ‘ Rasuulku (Salalaahu calayhi wa
calaa aalihii wasalam). waxa uu ku faral yeelay sakaatul fidriga : Adoonkii, xortii, labkii, dhadigii,ilmihii yaraa,iyo qofkii waynaa ee muslimka ahaa.inay bixiyaan hal koombo oo cunto ah. Bixiyaana inta ka horaysa intaan loo soo bixin salaadda ciidda iyagoo u bixinaya si miisan leh, sidoo kale waxa is weydiin leh maxaa la bixinayaa ayaa ku cad diinta oo isweydiin leh ? Maxaa la bixinayaa waa nocma Sida diinta adilada ku cad waa in la bixiyaa Cunto, oo ah koombo, qiyaas ahaana la mida (2.40g ). oo ah cuntada markaa qaalibka ah. Sida bariis , daqiiq , sonlor iyowixii lamidaa. Mar hadii aynu soo baranay maxaa labinayaa waxa isweydiin suaasha labaad Waxa kale oo isweydiin leh yaa laga bixinayaa fidriga ? Yaa laga bixinayaa Waxa llaga bixinayaa dhamaan cidii aaad adigu quudiso sida waxan siiso ama aad masuurfto sida caruurta xaaskaga iyo dhamaan waxaad masruufto sidaku cad xadiiska ibnu Cumar: rasulka kasoo wariyey “Rasuulku wuxuu amray sadaqatul fidiriga ilmihii yaraa, qofkii waynaa,xortii iyo adoonkii la quudinayay “ Mar hadii aynu soo baranaya maxaa labixinayaa yaa laga biximayaa,waxa kaloo isweydiin leh yay ku baxaysaa . Cideebay ku baxaysaa waxaa la siinayaa fuqurada iyo masaakinta aan awoodin , sida saxa ah. Meel kale ma loo diri karaa Oo maku baxaysaa Mar hadii aynu soo baranaya maxaa labixinayaa yaa laga biximayaa, yay ku baxaysaa, waxa kaloo isweydiin leh Meel kale ma loo diri karaa ? sida sunada waafaqsan kuna saxada ah waa in lagu bixiyaa meesha la joogo, hadiise masaakiin qaadata laga waayo meesha, waa la diri karaa, balse waa in aanay dhaafin xiligii loogu tala galaya ama waqtigii ku saxdaa ahaa ee ay baxaysay ciidul fidrigu, oo ah Salaada ciida ka hor, lana bixiyaa cunto, lana siiyaa dadka ay ku baxaysoee aan awoodin sida (fuqarada iyo masaakiinta). Wakhtigee ama goormaa Labixinayaa Mar hadii aynu soo baranaya maxaa labixinayaa yaa laga biximayaa, yay ku baxaysaa, Meel kale ma loo diri karaa, waxa kaloo isweydiin leh Waqtigee labixinayaa ? waxay gudmaysaa oo ay ku haboontahay in labixiyo inta aan salaada ciida loo soo bixin , mana banaana in dib uga dhacdo salaadda, sidoo kale waxaa laga hor marin karaa laba maalmood intaan la ciidin..Hadii ay dib uga dhacdo salaadda ciidda waxay noqonaysaa sadaqo ka mida sadaqaadka labixiyo. Mana noqonayso sakaatul fidri